Sidee loo xiraa baarkinka khafiifka ah guga | Ragga Stylish
Baarkinka iftiinka waa waajib waqtiga nasashada, iyo sanadkan xitaa ka sii badan, maadaama ay sidoo kale ka mid yihiin jaakadaha ugu casrisan.
Abuureyaasha silhouettes dabacsan oo aad u shaqeynaya Xilliga inta badan lagu tilmaamo roobka, kuwan soo socdaa waa afar muuqaal, laakiin aad u kala duwan, habab lagu isku daro baarkinka iyo jaakadaha xilli-ciyaareedka guud ahaan guud ahaan.
2 Casri ah oo casri ah
Ami wuxuu soo jeedinayaa a gabardine parka ka badan suud shandad leh. Taangiga dusha sare iyo kabaha isboortiga ayaa xoojiya hawada isboortiga ee muuqaalka. Si kastaba ha noqotee, saldhiggu wali waa caqli, taas oo ah sababta gariirrada ka soo baxa setku u qurux badan yihiin.
Casri ah oo casri ah
Surwaal iyo surwaal dherer dhererkiisu waa iskudhafka Michael Kors uu sharad ku sameynayo gugiisa / xagaaga 2017. Muuqaalka laba midab (cawl iyo caddaan) iyo mid aad u fiican, ku habboon waqtiga firaaqada.
Golaha New York
Fikradda ugu magaalo iyo qabow waxay ka timaaddaa Golaha New York. Baarkinka naqshadeynta isboortiga waxaa lagu daraa funaanad weyn oo daabacan, surwaal jilicsan iyo kabo. Ku sharad codadka dhexdhexaadka ah ee jaakada iyo caddaanka dharka intiisa kale wuxuu siinayaa muuqaalka hawo aad u macaan iyo gu '.
Raf Simons wuxuu u jeestay dhowr jaakado dhaadheer oo uu ku uruuriyay gugan, isagoo sameysmay minimalist waxay u egtahay inkasta oo ay la socoto faahfaahin siineysa dabeecad badan, sida daboolka, qoorta laba jibbaaran ee funaanad iyo flip-flops.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Afar siyaabood oo casri ah oo loo xidho baarkinka miisaanka culus